GOPHER: SAWIR, SHARAXAAD DHEER OO QAJILAN, YARYAR, HURUUD AH, LAKABYO IYO NOOCYO STEPPE - BEER CAGAARAN
Noocyada warwareega ee Russia, khatar u ah beerta: waxa ay cunaan iyo sida ay u eegaan sawirka
Gophers waa xubno ka mid ah qoyska isku duuban, oo ka kooban 10 nooc oo kala duwan. Waxay khatar culus u yihiin beeraha ku yaala gobollada kore ee dalka..
Sababtoo ah kicinta firfircoon, jiirka ayaa si weyn loogu qaybiyey guud ahaan Ruushka.
Muuqaal, sharaxaad iyo tarin
Dhererka jirka ee xayawaanka waa qiyaastii 30-35 cmDaboolku waa 30% wadarta guud ee jirka.
Midabka dhabarka waa mugdi, madow dahab ah oo leh dhejis iyo dhuudhyo. Cheeks iyo indhaha ayaa leh dhibco buni ah.. Madaxa iyo xabadka leh madow lacag ah.
Inta badan jidhka waxaa lagu daboolaa lebis yar.
WARBIXIN. Qoyska gophers waxay jecel yihiin in ay degaan gobollada steppe, doorbidaya cawska oo ay ka reebaan cawska. Sidoo kale inta badan laga helaa kalluunka kaynta iyo keynta koonfurta.
Hoyga ugu weyn waa beeraha steppe leh dalagyada dilka ah. Gofers waxay ku nool yihiin si joogto ah garoonka dhexdiisa, oo aan ku badneyn jidadka, wadooyinka iyo qarka kaynta.
Noocyada qaarkood waa reer-guuraa, oo u wareegaya beeraha. Dukaammadu waxay u diyaariyaan gurigooda barafka, kuwaas oo noqon kara mid ku meel gaadh ah ama joogto ah.
Dadka qaangaarka ah waxay inta badan ku nool yihiin si khaas ah, meelo kala duwan. Xayawaanku waxay hirgeliyaan hudheelo gaar ah, iyada oo ay ku jiraan caws, caws iyo dhogor yar.
WARBIXIN. Gaabisku wuxuu seexanayaa xilliga jiilaalka, xilligiisu wuxuu soconayaa 7 ilaa 9 bilood. Xaaladaha aan fiicnayn xilliga qaboobaha badanaa way toosi karaan.
Xilliga xilliga taranka wuxuu bilaabmaa guga marka xayawaanka ka soo kicinayaan suunka. Gogosha dumarka ayaa dhalin kara laga bilaabo 5 illaa 10 dhudhun. Ka dib 1-2 bilood, dhallinyaradu waxay noqdaan kuwo madaxbannaan.
Goobo badan ayaa loo qaybiyey gobollo badan, gaar ahaan gobollada Lower Volga, gobolka Orenburg, Ciscaucasia, Yakutia, gobollada Galbeedka iyo Bariga Siberiya.
Cufnaanta qaybinta ayaa aad u cakiran, gaar ahaan jiirka badan ee gobolka Volga. Intii lagu guda jiray horumarinta dhulalka bikradaha ah waxay si firfircoon u barteen dhulka cusub.
Gophers ayaa khatar weyn ku ah beeraha waxayna si firfircoon ula dagaalamaan. Si kastaba ha noqotee, kuwani ma aha cayayaanka kaliya ee si dhab ah u waxyeeleyn kara dalagga.
Waxaan idiin diyaarsaney waxyaabo taxane ah oo ku saabsan sida kuwan: sholaatada, jiirarka, jiirarka iyo jiirka.
Waa maxay quudinta iyo doorka lamaanaha cuntada
Gophers feed inta badan cunno cunno, tiro badan oo wax cunaya miraha miraha iyo dhirta duurka. Dhismo qaybo kala duwan ee dhirta marxaladaha kala duwan ee horumarkiisa: abuurka abuurka, caleemaha dhalinyarada, jirridaha, caleemaha, ubaxa.
Laakiin inta badan dhan waxay jecel yihiin in ay cunaan miraha qamadiga ah ee dhirta firileyda ahsida hadhuudhka, masago, sarreen iyo digir. Dabeecadda, tirada jiirka ayaa waxaa nidaamiya hareeraha maxaliga ah: dawacooyinka iyo feerka. Taabacayaashu iyo soodhawrku waxay u baxayaan qoryaha darbiga ah, ama halkii dhererkiisa.
Noocyada quruxda sawirada
MUHIIM! Maalin maalinti hal qaxwo ayaa isticmaali karta illaa 50 garaam oo hadhuudh ah. Iyada oo celcelis ahaan dadweynaha hektar ah, waxaad ku waayi kartaa ilaa 45 kg dalagga.
Dhibaatada ugu weyn ee beeraha waa lix nooc.:
Little Gopher. Waa mid aad u ballaadhan oo ku yaal bannaanka Caucasus, gobolka Volga iyo gobollada Siberia.
Pygmaeus yar yar Gopher ama Spermophilus
Mottled Gopher. Waxay ku dhacdaa meelaha bartamaha Central Chernozem.
Suugaanta xayawaanka ama Spermophilus xasaasiyad
Gaduud-casaan. Badanaa waxaa loo qaybiyey wareegga iyo wareegga Altai, oo ku yaal galbeedka Siberiya.
Cadaadiska jilicsan ee jilicsan ama Spermophilus erythrogenys
Marwo dabiici ah oo dheer. Waxaa lagu qaybiyey galbeedka Siberia iyo Yakutiya.
Cajiibka dhulka ku dhajiyay ama Urokitellus undulatus
Reddish Gopher. Goobta qaar ka mid ah meelaha Bashkortostan, gobolka Volga iyo galbeedka Siberiya.
Reddish Gopher ama Spermophilus major
Yellow Gopher. Waxay ku dhacdaa meelaha hoose ee Volga.
Xajiinka jaalaha ah ama Spermophilus fulvus
Muuqaal muuqda oo ka mid ah inta hartay ee jiirka jeebabka waaweyn ee jilicsantaas oo ay xayawaanku qaadi karaan xaddi badan oo quudin ah.
Waxa kale oo ay leeyihiin laba ka mid ah dhagxaanta huruudka ah ee huruudka ah oo u baahan in si joogta ah dhulka loogu noqdo. Xayawaankani sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin awooddooda Hibernate muddo dheer.
Gophers waa xayawaan badan oo xayawaan ah, taas oo macnaheedu yahay awood u leh inuu waxyeelo dalagyo kala duwan. Xayawaankani waxay keenaan waxyeelada ugu weyn ee hadhuudhka, cunista caleemaha cagaaran iyo miraha maqaarka. Sababtoo ah quudinta noocaas ah, dhibco balaaran ayaa la sameeyaa hareeraha beeraha, iyada oo dad badan, meelo fog fogna ay ku xiran yihiin midba midka kale, dalagana waa la gebi ahaanba la burburin karaa.
Gophers wax dhaawac ah ma keenaan dalagga hadhuudhkawaxay qodayaan abuurka biqil, oo si khaas ah loo khafiifiyo dalagyada. Sidoo kale, dhirta kor u kacday, waxay cunaan caleemaha ugu horreeya, caleenta haray waxay gebi ahaanba u dhintaan ama aad u yaraadaan.
Marka lagu daro cunista cagaarsho, dhaawac ayaa sidoo kale keena marka godka qodaya, marka qadar badan oo dhul ah lagu tuuro dusha sare, taas oo ay adagtahay goosashada. Dhulka daaqa 20-30 qof oo hektar ah ayaa awood u leh inay burburiyaan wax ka badan kala badh dabiiciga kaydka. Waxay sidoo kale ku dhacaan suunka dib loo beeray.. Gophers waxay qodaan oo cunaan miraha kala duwan ee noocyada geedka.
Muddo hal mar ah, hal xabbo cunid waxay cuni karaan 4 kg oo hadhuudh ah. Marka tirada 10 qof oo hektar ah, mid kasta wuxuu lumin doonaa 40 kg oo hadhuudh ah.
Waa in la ogaadaa in aan lammaanaha oo kaliya ay dhaawici karaan dhaawacyo beeraleyda, beerta iyo beerta. Cayayaanka xasharaadku maaha kuwo halis ah.
Waxaan kuu diyaarinnay qalab taxane ah oo ku saabsan sida ugu kalsoonida badan. Akhri dhammaan wixii ku saabsan dareenka, baradho-baradho iyo lamadegaan.
Siyaabaha loo dagaalamo
Si loola dagaallamo qashinka waxay isticmaalaan habab badan:
Cuntada sunta ah. Cunnooyinka cagaarka ama hadhuudhka ayaa la qooyay waxaana lagu daaweeyaa fosfiidka zinc. Dabadeedna miro ayaa lagu kala firdhiyey gacanta, iyadoo la adeegsanaayo baabuur ama duulimaad, meel u dhow xero ballaaran ee xayawaanka. Isla mar ahaantaana waa lagama maarmaan in si adag loo ilaaliyo dhammaan sharciyada badbaadada.
MUHIIM. Beerka qadku waa inuu ahaado mid tayo wanaagsan, oo aan lahayn nijaar iyo ur.
Gabbasho Habkani waa mid adag oo qaali ah. Waa in loo adeegsadaa meelo aan macquul ahayn in lagu dabaqo habka abuurka abuurka.
Qabashada dabinka. Habkani waxaa loo isticmaalaa dhinaca duleedka dalagga, waddooyinka ku dhow. Codso dabeecadaha arjiga # 0 iyo lambar 1. Habkani wuxuu si gaar ah waxtar u leeyahay guga ka hor inta muuqaalka xayawaanka yar yar.
Digniin! Gophers waxay qaadaan cudurka daacuunka iyo cudurrada kale ee faafa, waxaadna ku qaadi kartaa infekshinka tooska ah ee xayawaanka, iyo qaniinyada xayawaanka ku nool.
Noocyo badan oo ka mid ah warshaduhu waxay waxyeelo u geystaan ​​beeraha, burburinta dalagyada iyo daaqa. Dagaalka iyaga ayaa ah caqabad ku ah beeraleyda.